प्रधानमन्त्री नबन्दै मन्त्री छान्न प्रचण्डलाई हतारो, आजै नाम टुंग्याउने तयारी – YesKathmandu.com
प्रधानमन्त्री नबन्दै मन्त्री छान्न प्रचण्डलाई हतारो, आजै नाम टुंग्याउने तयारी
शुक्रबार ३१, असार २०७३
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री नबन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री छान्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेससँग लिखित सहमति भएपछि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ । कुन कुन मन्त्रालय पाउने हो ? त्यसको टुंगो नलाग्दै दाहाल मन्त्री छान्न ब्यस्त भएका छन् ।
दाहाल नेतृत्वमा नेता कृष्णबहादुर महरा लगभग पक्का छन् । उनी अर्थमन्त्री हुने तयारी थालेका छन् । तिनै महरालाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दाहालले दिएका छन् । दाहालका नजरमा जनार्दन शर्मा पनि थिए । तर उनले तत्काल मन्त्री नखाने निर्णय गरेका छन् ।
महराले हाल बहालमन्त्री रेखा शर्मालाई फेरी मन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । आज बस्ने माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो बैठकमा महराले मन्त्री बन्नेहरुकोे सुचि प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । उनले प्रस्तुत गरेको सुचीका आधारमा मन्त्रीको टुंगो लगाउने तयारी माओवादीले गरेको छ ।
उता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि मन्त्री बन्नेको दौड सुरु भएको छ । गृहमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसबाट तीन जनाको दावी रहेको छ । अर्जुननरसिंह केसी, विमलेन्द्र निधि र पूर्णबहादुर खड्काको नाम चर्चामा रहेको छ ।
केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभयोेः रामचन्द्र पौडेल
व्याकरणीय अशुद्धी भेटिएपछि परिवर्तन हुने भो रु. २० को नोट !
‘मैले लाज मान्नु पर्दैन, भ्रष्टाचारका मुल जड नेताहरु नै हुन्’
विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार खर्चमा रोक,विदेश उपचारका लागि १५ लाख
वैशको मस्तिले वूढेसकालमा सास्ती !
आठ वर्षमा विवाह,तेह्र वर्षमा विधुवा भएकी शान्ता मानवीको संर्घषशील जीवन कहानी
बेलायतमा भएको आतङ्ककारी हमलाको नेपाल सरकारद्वारा भत्सना
अर्थमन्त्री महतसँग पाँच मन्त्रीको बोलचाल बन्द
कांग्रेसको बैंक खातामा ६ करोड ६४ लाख, तर महाधिबेशनको खर्च भुक्तानी भएन
विनाशकारी भूकम्प गएको १२ दिनपछि शिर्ष नेता प्रभावित क्षेत्रमा
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउन घरदैलो अभियानमा महावीर
हाउस्टनका ९११ जनालाई जेल सजाय
ट्राफिक जामले बन्दको दिनमा पनि शान्ति दिएन
उम्मेदवार नेपालको, मतदाता भारतको !
‘प्रचण्ड कसका भरिया बनेका हुन’